झन भाइरल बन्यो बाँकेको ‘न्यू सिटी भाइरल रोड’ - Nepali in Australia
झन भाइरल बन्यो बाँकेको ‘न्यू सिटी भाइरल रोड’
September 11, 2021 autherLeaveaComment on झन भाइरल बन्यो बाँकेको ‘न्यू सिटी भाइरल रोड’
नेपालगञ्ज । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको रोड हेर्न कै लागि हजारौं मानिस बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित न्यू सिटीमा पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय वीर बहादुर परियारले भने, ‘कसैले सोचेका पनि थिएनन्, यति भाइरल रोड र मानिसको भीडभाड हुन्छ भन्ने ।’
टिकटक बनाउन र मानिसहरुको भीड हेर्न पनि यहाँ दैनिक हजारौं मानिसहरु आउने गरेको वीर बहादुरको भनाइ छ । केही समय अगाडिसम्म सुनसान हुने न्यू सिटी भाइरल रोड अहिलेको चहलपहलले निकै प्रख्यात भएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल भएको न्यू सिटी सडक झनै प्रख्यात बन्दै गएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको न्यू सिटी रोड हेर्न र टिकटक बनाउन आउनेहरुको भीड नै लागेको हुन्छ ।
अहिले न्यू सिटीमा नास्ता पसल, चटपटे, होटललगायत गाडी पार्किङको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । निजी जग्गामा प्लटिङ गरी कालोपत्रे गरिएको सडक एकाएक भाइरल भएको देखेर स्थानीय दंग परेका छन् ।
वरिपरि हरियाली खेत, सुनसान वातावरण, चारैतिर मनमोहक दृश्यसँगै जताततै रुखहरुको छायाँ हुने भाइरल रोडमा टिकटक बनाउन र हेर्न आउनेको घुइचो नै लाग्ने गरेको कोहलपुर नगरपालिका–३ का सुरज चौधरी बताउँछन् ।
‘म दैनिक एक पटक न्यू सिटी भाइरल रोड पुग्ने गरेको छु’, उनले भने, ‘त्यस ठाउँमा पुग्दा र त्यहाँको चहलपहल तथा मानिसको भीडभाडले आफैलाई खुसी बनाउछ । दुःख, पीडा पनि कम हुने भएको हुनाले मन भुलाउन दैनिक पुग्ने गरेको छु ।’
उनले थप भने, ‘खाली समय हुने वित्तिकै घुन्न पुगिहाल्छु ।’ निजी जग्गा प्लटिङ गरेको सुन्दर फाँटको बीच बीचमा फराकिलो कालोपत्रे गरिएको पक्की सडकले मनमोहक नै बनाएको छ ।
टाढा–टाढादेखि भाइरल रोड हेर्न दैनिक हजारौंको संख्यामा आउने गरेको कोहलपुर १४ बस्ने विमला पुनले बताइन् । ‘मैले पनि टिकटक मै भाइरल भएको रोड हेर्न समय मिलाएको थिए, बल्ल समय मिलाएर हेर्न आएँ’, उनले भनिन् ।
उनले थप भनिन्, ‘यहाँ आउँदा त साँच्चै नै रमाइलो ठाउँ भएको महसुस गरेकी छु ।’ यहाँ म्युजिक भिडियो बनाउन, सेल्फी खिच्न तथा टिकटक बनाउन आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
यो सडक खेतको बीचमा बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल भएको देखेर आफू पनि घुम्न आएको बताउँछन् अशोक पुरी । ‘सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको देखे, यहाँ नआइ मन मानेन’ उनले भने ।
त्यस्तै स्थानीय सन्तोष चौधरीले पनि टिकटकमा देखेर यो सडकको बारेमा थाहा पाएको बताए । उनले भने, ‘म आज पहिलोपटक यहाँ आएँ ।’२०७७ चैत महिनामा कालोपत्र गरेपछि एकाएक आकर्षक बनेको कोहलपुर डेभलपर प्रा.लि. न्यु सिटीका म्यानेजर सुरेश आचार्यले बताए । ‘तिजको दिन त झनै खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन’, उनले भने, ‘हरेक दिन चहलपहल उत्तिकै हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न तिर लागिपरेका छौं ।’
उनले थप भने, ‘न्यू सिटीभित्र १५ विगाह जमिन छ, जहाँ ६०० वटा घडेरी बनाएका छौं । यहाँ पक्की बाटो, विजुली बत्ति, खानेपानीको व्यवस्था, बसपार्कको सुविधा, हस्पिटलको लागि पनि १५ सैयाको बैजनाथ गाउँपालिका स्तरीय अस्पताल निर्माण कार्यलगायतका सुविधा रहेको छ ।’
अहिलेसम्म ३० हजार बढीले यसको अवलोकन गरिसकेका उनको अनुमान छ । न्यू सिटीमा सुविधा सम्पन्न आकर्षक पूर्वाधारयुक्त घडेरी पनि विक्रीमा रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय दैनिक रुपमा पर्यटक बढ्न थालेपछि वातावरण प्रदुषण भइरहेको उनको गुनासो छ ।
‘हजारौंको भीडमा दैनिक फोहर बढिरहेको छ, तर सफा कस्ले गर्ने ?’ उनले भने । यस ठाउँलाई अझ व्यवस्थित गरेर हेर्न लायक बनाइएमा झनै प्रख्यात हुने यहाँका अगुवाहरुको भनाइ छ । यो खबर न्युज24नेपालमा छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले दशैंमा प्रति घरपरिवारलाई १० हजार राहत दिने
संखुवासभा घटनाले लियो नयाँ मोड, प्रहरीले गाउँ मै फेला पार्यो यस्तो प्रमाण २६ वर्षका युवा परे पक्राउ, किन गरेन सार्वजनिक ?
अन्ततः भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय !
January 10, 2021 January 10, 2021 auther